Twitter on curcurkaaga oo leh Twitter for Android Wear | Androidsis
Waa inuu leeyahay barnaamijyo loogu talagalay Android Wear: Maanta Twitter loogu talagalay Android Wear
Waxaan ku sii wadaynaa qaybtan waa inuu leeyahay barnaamijyo loogu talagalay Android Wear, taas oo aan dooneyno inaan si kalsooni leh uga faa'iideysanno howlaha ay bixiso tan Motorola smart ka daawo Moto 360. Qayb loo jihaysan doono soo bandhig oo ku tali codsiyada ugu fiican uguna waxqabadka badan loogu talagalay Smartwatches-kan oo leh nidaam hawlgal Android Wear.
Munaasabaddan awgeed, waxaannu doorannay codsi noqon doona waa inuu lahaadaa dhammaan isticmaaleyaasha Twitter in ay leeyihiin mid ka mid ah Smartwatches sida kan la sheegay Motorola Moto 360. Codsiga waxaa loo yaqaan Twitter loogu talagalay Android Wear, oo sidii caadiga ahayd qaybtaan, waxaan awoodi doonnaa inaan gebi ahaanba bilaash kaga helno Google Play Store.
Muxuu Twitter-ka Android Wear na siiyaa?
Twitter loogu talagalay Android Wear waxay na siineysaa waxqabad aad u weyn oo ah inaan awoodno inaan la tashano akoonkeena Twitter iyada oo aan loo baahnayn in lagala baxo taleefankeena casriga ah jeebkeena. Gaaritaan toos ah oo marin toos ah looga heli karo amarka codka «Furan TweetWear» ama helitaanka khaanadda arjiga ee 'Android Wear smartwatch'.
Laga soo bilaabo Twitter ee loogu talagalay Android Wear arjiga, marka lagu daro inaad awood u leedahay la tasho dhammaan Twitters-ka lagu daabacay koontadeena, waxaan sidoo kale awoodi doonaa inaan calaamadeysano sida ugu cadcad kuwa aan u aragno inay ku habboon yihiin, iyo sidoo kale kuwa Dib-u-qor Twitter kasta oo ka socda koontadayada.
Mid ka mid ah xulashooyinka ka maqan arjiga, waxay noqon laheyd suurtagalnimada toos u qori karaan Twitter cusub iyada oo loo marayo amar "OK GOOGLE" iyo tusaale ahaan «Ku dhaji Twitter oo lagu daray farriinta la doonayo. Waxqabad aan halkaan ka bilowno oo aan ku soo bandhigeyno sheegasho ku saabsan horumarinta barnaamijka, si aan u aragno haddii xoogaa nasiib ah ay na dhageysan doonaan oo ay isku dayi doonaan inay ku hirgeliyaan cusbooneysiin cusub. Hadday sidaas tahay, waxaan u badan nahay inaan wajahno Codsiga ugufiican ee lagu xakameeyo bartayada 'Twitter' ee 'Android Wear'.
Fiidiyowga laftiisa waad arki kartaa habka dejinta arjiga fudud, taas oo xilligan, kaliya noo ogolaaneysa inaan xakameyno hal koonto oo Twitter ah.
Kadib waxaan kaaga tagayaa isku xirka tooska ah ee Google Play Store kuwa doonaya inay rakibaan si ay u tijaabiyaan dhamaan howlaha jira ee tani na siiso app bilaash ah oo loogu talagalay Android Wear.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Smartwatch » Waa inuu leeyahay barnaamijyo loogu talagalay Android Wear: Maanta Twitter loogu talagalay Android Wear
Qiimaha suurtagalka ah ee Nexus 6 iyo Nexus 9 waa la sifeeyey
Ka takhalus maandooriyahaaga casrigaaga oo leh OffTime for Android